Andosol: njirimara, njirimara na ojiji nke ala a | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe obula ichoro ima banyere ala andosol
N'ụwa nile enwere ụdị ala dị iche iche. Typesdị ala ndị a dịgasị iche dabere na ọdịdị ha, ọdịdị anụ ahụ ha na nke kemịkal, omimi ha, porosity, permeability na agba, n'etiti njirimara ndị ọzọ. Taa, anyị ga-ekwu maka otu ụdị ala akpọrọ andosol. Ọ bụ ụdị nke ala mgbawa ugwu na-etolite na mgbawa ugwu na iko yana site na ihe ndị ọzọ pyroclastic.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na njirimara niile nke andosol nwere.
2 Nkọwa zuru oke nke andosol
3 Na-eji na nguzobe nke andosol
Enye edi orụk isọn̄ emi ọkọride ke obot emi. Mgbe ha dị obere, ha nwere ụcha gbara ọchịchịrị ma nwee nnukwu porous. Nke a porosity bụ n'ihi na ụdị nkume nke ọ na-guzobere. Dị ka anyị si mara, a ala mejupụtara tumadi si bedrock. Nkume a na-agbasasị ma na-agbanwe oge oge na ihe dị iche iche ihe omumu banyere ala. Dabere n’ụdị ndị na-ahụkarị ala na mpaghara na njirimara nke ihe mejupụtara ala a kwuru, anyị ga-enwe otu ụdị ma ọ bụ ọzọ.
Andosol bụ ala nwere oke njigide, usoro dị mma ma dịkwa mfe igbachi. Ọ nwere ọtụtụ ọmụmụ ọ bụ ezie na o nwere ụfọdụ ihe mgbochi ma a bịa n'iji ha arụ ọrụ ugbo. Agbanyeghị, ọ bụ ala a na-ejikọkarị n'ọhịa nke ugbo mgbe ọ bụla ọnọdụ enyemaka ahụ kwere ya. Ọnọdụ nke ụdị ala a n'ozuzu na mpaghara nwere ụdị ọrụ mgbawa na-arụ ọrụ.
A na-ewerekarị ala ndị a dị ka uru maka ọdịbendị na ndị mmadụ na-emepe emepe. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na mmepeanya ndị a nwere ike idozi na ala ndị a n'agbanyeghị nsogbu dị egwu nke nwere ike iyi egwu ebe ọ bụ na ha nwere ezigbo ọmụmụ. Ọ bụrụ na anyị enyochaa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke obodo ukwu ndị mepere emepe na ọnụ ọgụgụ ndị na-emepe emepe, dị ka mba ndị dị na South America, anyị pụrụ ịhụ na ugwu ndị Andean nwere ugwu ndị na-agba agba ma na-aga nso n’obere ala ndị na-eme nri nke ọma bụ́ ndị a na-ahụkarị n’ọhịa ndị dị n’ebe okpomọkụ.
Anosol bu ala nke nwere uzo Vitric ma obu Anndic. Ogologo a na-amalite site na 25 centimeters miri n'ihi nke a. O nweghi ihe omimi ozo nke na achoputa ya ma o buru na e kpochapu ya site na ahihia ma obu ala ndi ozo na-aputa ihe omimi na ihe dika 50 centimeters.
Nkọwa zuru oke nke andosol
Ndị a bụ ala nwere ọchịchọ nke agba ojii yana oke ala ọkụ. Ihe ndị nne na nna bụ ash na-agbọpụta ọkụ, ọ bụ ezie na enwere ike ịmalite ya tuffs, pumice, ash na ndị ọzọ na mgbawa ugwu. Gburugburu ala nke ala ndị a na-ejikarị ihe mkpuchi na-adịghị edozi bụ ndị gbara ugwu gburugburu. O choro iru mmiri, arctic nke okpomoku ndi nwere otutu ahihia. Ọ bụ ụdị ahịhịa a dịgasị iche iche na-eme ka ala nwee nnukwu nri na-edozi ahụ.
Banyere mmepe nke profaịlụ nke ala a, ọ na-enwekarị profaịlụ AC ma ọ bụ ABC. Layer B nke ala a dabere na omimi ya. Dị ka ọ na-adịkarị, mbara ala a nke miri emi na-adị na ala ndị ahụ nwere ụdị ụrọ. Ọ bụ ala nwere ihu igwe na-agba ọsọ nke bi na mgbanwe biogeochemical dị elu n'ihi ihe nke ihe ndị mgbawa o nwere. Ihe ndị a dị oke egwu ma na - ebute ngwongwo nke ogige siri ike nke ihe ndị na - edozi ahụ na nke ịnweta dịka imogolite na ferrihydrite.
Na-eji na nguzobe nke andosol
Otu n'ime isi ojiji nke andosol bụ na akọ. N'ịbụ ụdị ala nwere nnukwu ọmụmụ, a na-eji ya na-eto ụdị osisi dị iche iche. Nnukwu mmachi nke anyị kpọtụrụ aha n'elu bụ nnukwu ikike ọ nwere iji jigide site na ụzọ na-enweghị bioavailable. Nke ahụ bụ, ọ bụ ala nwere ike ịnweta ọkwa dị elu ma enweghị ike iji ya ma ọ bụ jikọta ya site na mgbọrọgwụ nke ahịhịa. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ntakịrị ala karịa ebe ọ bụ na, n'agbanyeghị na ọ nwere ọtụtụ nri na - edozi ahụ, osisi ahụ enweghị ike iji ya. Ọzọkwa, a na-ahụ ọtụtụ ala ndị a n'ebe dị ka elu elu ugwu.
Mgbe ala dị na ebe nwere nnukwu enyemaka na ebe kpọdara akpọda, ọ na-abụkarị mmachi enyere ya na ebumnuche itinye ya n'ọrụ. Ọ bụrụ na ala ahụ nwere enyemaka pụtara ìhè karị, ọ gaghị enwe oke nkesa na profaịlụ ya na mbara igwe ya ebe a na-ahụ ihe ndị na-edozi ahụ iji weta osisi ahụ. Ọzọkwa, anyị ga-elebara runoff site na ọdịda. N'elu ala, mmiri ozuzo na-ewepụta mmiri ka ukwuu nke ga-ejedebe ịdọrọ akụkụ dị ukwuu nke profaịlụ ndị nwere ogo nri dị elu ka ihe ọkụkụ wee nwee ike ịzụlite n'ọnọdụ dị mma.
Typedị ala a bụ ihe ngosi nke ọnụnọ Andic ma ọ bụ mbara igwe Vitric. Oke ugwu ndị ahụ Andean bara ọgaranya na mineral ndị yiri Alofan ma nwee nnukwu ogige nke humus na aluminom ebe mbara igwe nwere ụyọkọ ugwu mgbawa n'ụba.
Guzo nke udiri ala nke a dabere na igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, porosity, permeability, ego nke ihe ndị dị mma, yana ọnụnọ nke ihe ọkụkụ. Ihe mgbanwe niile ndị a bụ ndị na-akọwa ụdị ala nke ga-adị na mbara ala ụfọdụ.
Na njirimara ọdịdị nke otu andosol anyị na-ahụ oke AC ma ọ bụ ABC. Akpa mmiri nke mbụ na-abụkarị ọchịchịrị na mmiri karịa ndị ọzọ. The organic okwu ọdịnaya nke a elu mmiri bụ gburugburu 8% ọ bụ ezie na ha nwere ike ịchọta nwere ruo 30% na organic okwu.
Imirikiti ala ndị a nwere ezigbo ọwara n'ime ụlọ n'ihi oke porosity ha. N'ihi ya, ha bụ nnọọ ihe na-akpali ala si ele ihe anya nke ọma ogbugba mmiri n'ubi. Igwe a na-ekpo ọkụ na-egbochi mmiri ozuzo ịbakọta, nke bụ ihe na-ekpebi mmepe nke ọtụtụ osisi.
O nwere nnukwu mineral dog magnesia dị ka ha dị olivine, pyroxenes na amphiboles. O nwekwara feldspars na quartz site na aja na silt irighiri. Ọdịdị nchịkọta ezi ha nwere na mmiri zuru oke na-eme ka ala ndị a ghara ịda mbà na mmiri mbuze. Nke a bụ uru ọzọ dị oke mkpa ha ga-eji rụọ ọrụ n’ubi.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere andosol.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe obula ichoro ima banyere ala andosol
Carbon ke uwa